Mixer Concrete Sicoma
Sisoma Concrete Mixer 2m3
Sisima Concrete Mixer
Mixer Concrete Twin Shaft Concrete
SICOMA dia mamokatra andiana mixeur misy maodely marobe. Araka ny filan'ny mpanjifa, ny orinasanay dia misafidy ny ankamaroan'ny mainframe MAO / MSO / MEO / MPC / AMP. Ny masinina dia mazàna amin'ny ampahany amin'ny rafitra fito: tanky fampifangaroana / Rafitra fampifangaroana / boaty fihaonana / rafitra fanaraha-maso sy fanairana / rafitra fanamafisam-peo (tsy ho an'ny andian-tsarimihetsika MPC / AMP) / Rafitra famoahana / Rafitra fandefasana
MAO Standard Series Twin Shaft Famporisihana Concrete Mixer
Shatt dia mamarana ny fiarovana multi soal sy ny fanadiovan-drivotra mba hialana amin'ny famoahana rano.
Rafitra fanaraha-maso mixer Uniquo hanaraha-maso ireo condilion-n'ny goarbox, paompy fivoahana. ary paompy fanosotra elektronika.
Miaraka amin'ny DC 24V paompy fanosotra menaka manitra manokana mpampifangaro beton, amidio. fandaharana mihazakazaka fandaharana.wator- porofo. vovoka-porofo, performanco mahatalanjona.
Rafitra fitifirana rano maro-fantsona hahazoana antoka ny fizarana rano amin'ny lafaoro.
Famolavolana adidy mavesatra, fiasan-doha.
Boaty fanamafisana nohamafisina miaraka amina fitaovam-piadiana amin'ny alàlan'ny teknolojia avo lenta. loadacacacité avo sy lile servico lava kokoa.
Ny fahaizan'ny rangod amin'ny 15 cu. m hatramin'ny 6.0cu m.
Capactity famenoana maina (L) 3000 4500 6000
Vokatra mifintina (L) 2000 3000 4000
Hafainganana mifangaro(R / m) 24.5 24.5 24.5
Kitapo fampifangaroana(S) 30 30 30
Afangaro amin'ny lelany (prece) 14 16 20
Mampifangaro motera sy hery (kw) 2x37 2x55 2x75
Milanja amin'ny foana (KG) 7500 9200 11800
MSO Mini Series Twin Shaft Compterory Concrete Mixer
Ampiana amin'ny tombo-kase maro
Fitaovana paompy fanosorana manual
Curtain manondraka eo amin'ny fonony ambony mba hahazoana antoka fa mifangaro haingana sy feno
Paompy fanosorana mandeha ho azy DC24v
Ny fahaiza-manao dia manomboka amin'ny0.5cu.m ka hatramin'ny 1.5cu.m
Fahafahana mameno (L) 750 1500 2250
Vokatra mifintina (L) 500 1000 1500
Hafainganana mifangaro(R / m) 29 27 27
Blades mifangaro (pcs) 14 12 14
Mampifangaro motera sy hery (kw) 2x11 2x22 2X30
Milanja amin'ny foana (KG) 3600 5000 5600
MEO Compact Series Twin Shaft Compterory Concrete Mixer
Ampiasaina amin'ny tombo-kase maromaro,
Fitaovana paompy fanosorana amin'ny tanana.
Paompy fanosorana mandeha ho azy tsy mandeha ho azyDC24V.
Fanoherana avo lenta, tabataba ambany, fikirakirana azo antoka. Fikojakojana mora foana, kojakoja amin'ny vidiny mirary, fatra avo lenta eo amin'ny fampisehoana sy ny vidiny.
Ny fahaiza-manao dia manomboka amin'ny 2.0 cu.m.
Mety amin'ny fambolena zavamaniry, fanamafisana ny lavenona ary tetikasa hafa mifangaro amin'ny tontolo iainana.
Fahafahana mameno (L) 1250 1500
Vokatra mifintina (L) 750 1000
Hafainganana mifangaro r / m） 27 27
Kitapo mampifangaro （s） 30 30
Blades mifangaro (pcs) 10 10
Mampifangaro motera sy hery (kw) 2x18.5 2x22
Milanja amin'ny foana (KG) 4300 4500
MPC Planeta Mixer
Ny fomba fampifangaroana planeta dia mety amin'ny fampifangaroana ny beton-fahadiovana avo lenta, izay mety hahatonga ny fampifangaroana ireo fitaovana ho mitovy fanamiana kokoa;
Safidy mety indrindra ho an'ny indostrian'ny faritra sy ny faritra;
Ny varavarana famoahana dia azo sokafana sy hakatona amin'ny alàlan'ny fomba roa / hydraulic roa, izay azo ampiasaina amin'ny fijanonana maro;
Ny seranan-tsambo dia afaka misafidy làlana telo hafa, ary afaka manokatra mihoatra ny roa amin'ny fotoana iray izy;
Ara-toekarena sy maharitra, mora tazonina;
Raha ampitahaina amin'ny mixer-shaft kambana miaraka amin'ny volony mitovy, ambany ny haavony, ary mora ny fandaminana ny lamin'ny fifangaroana;
Fitaovana fampiakarana agregate tsy voatery;
Ny orinasa dia manana famatsiana maharitra amin'ny fitafiana mitafy;
Hita amin'ny 0.25m3 ~ 3.0m3 sy ny famaritana hafa.
Hafainganana amin'ny planeta (r / m)
Hafainganan'ny hala (r / m)
Isan'ny sandry lava mifangaro (pc)
Isan'ny sandry fohy mifangaro (pc)
Isan'ny sandry mifangaro (pc)
Air Purge Multi tombo-kase amin'ny famaranana
Fikojakojana ny Mixer Concrete
Hamarino ny fahadiovan'ny milina sy ny tontolo manodidina.
Esory ara-potoana ireo fitaovana voangona ao anaty hopper mba hamerenan'ny sensor ho lasa zero ara-dalàna.
Hamarino raha ampy ny menaka fanosorana isaky ny teboka fanosorana, ary tokony hihazona menaka ampy ny menaka fanosotra ao amin'ny rafitry ny rivotra.
Hamarino raha hafanana be loatra ny motera sy ny fitaovana elektrika, ny tabataba tsy ara-dalàna, na ara-dalàna ny mari-pamantarana, ary tsy simba ny rafitra famantarana.
Zahao sy ahitsy matetika ny varingarina, ny valizy lolo ary ny valizy solenoid matetika mba hahafeno ny fanokafana sy ny fanidiana ny fepetra takiana.
Hamarino matetika ny rafitra rehetra, ary araraoty ara-potoana raha misy fivoahan'ny vovoka, famoahana entona, famoahana solika ary famoahana herinaratra.
Ny hoppera mixer sy ny hopper dia tokony diovina isaky ny adiny efatra hisorohana ny beton-javatra sisa tavela amin'ny fanamafisana sy ny fanakanana ny fiasan'ny mahazatra.
Ny famindrana rehetra dia tokony hamoaka ny rano anatiny an'ny compressor rivotra, tanky fitahirizana rivotra ary sivana, ary hofoanana ny tsy fetezana mitranga mandritra ny fiasa.
Ny valizy lolo, mixer, valve solenoid, sivana rivotra ary fitaovana zavona menaka dia tazonina mifanaraka amin'ny torolàlana mifandraika amin'izany.
Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Concrete Mixer Spare Parts,